FISOLOKIANA AVO LENTA : Lehilahy milaza mahatafiditra mpiasa ao amin’ny « Finance » nosamborina
Efa an-taonany maro no nampalaza ny fandoavam-bolabe an-tapitrisany ka ahafahana mampiditra olona hiasa ao amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola na fantatry maro amin’ny hoe “Finance”. 14 janvier 2020
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Polisim-pirenena omaly , lehilahy iray mpiasam-panjakana ao amin’ny Minisiteran’ny Tetibola no voasambotry ny Polisin’ny SUT Tsaralalàna tamin’ny alakamisy 09 janoary 2019 teo Analakely noho ny resaka fisolokiana fampidirana mpiasam-panjakana ao amin’ny “ Finance”.
Naharay fitoriana miisa 5 ny polisy mikasika lehilahy 01 izay milaza fa mahavita mampiditra olona ho mpiasam-panjakana amin’ny tambiny 10 tapitrisa ariary. Natao ny fanadihadiana sy ny fikarohana rehetra ka fantatra fa misy olona 5 hafa ihany koa voasoloky tany amin’ny faritra. Rehefa nalaina am-bavany sy nampifandraisina ny fitorian’ireo olona 10 mianadahy ireo dia fantatra fa mitovy avokoa ny fomba fiasan’ireto mpisoloky.
Ny iray mandresy lahatra ny any amin’ny faritra fa mahavita mampiditra olona hiasa mpiasam-panjakana ao amin’ny Finance, ary rehefa roboka ireo olona dia omeny laharana finday iray, ka miresaka amin’ilay lehilahy mpiasan’ny Finance iray izay manazava bebe kokoa mikasika ny tokony hatao rehetra. Nandeha teo ny fanazavana ka alefa amin’ny finday atao “m-vola “ amin’ny laharana finday iray ny vola, ny antontantaratasy rehetra ilaina kosa dia alefa taksiborosy.
Misy foana ny fifampiresahana ary nifandray tsy tapaka tamin’ireo voasoloky ity lehilahy ity. Nalefa tamin’ny laharana iray ary ny vola ary nalefa taksiborosy nanaraka izany koa ny antontan-taratasy rehetra. Ny 19 septambra 2019 dia nanafatra ireo olona ireo mba hiakatra aty Antananarivo ilay rangahy nandefasana ny vola mba hanao hikarakara ny dosie raha ny filazany. Nony tonga teto an-toerana anefa ireo olona avy any amin’ny faritra ireo dia tsy nandeha intsony ny finday izay nifampiresahany tamin’ny mpandray vola, ary teo vao samy tonga saina fa voasoloky izy ireo ka nanapa-kevitra ny hametraka fitoriana.
Rehefa natao ny fanadihadiana rehetra mahakasika io finday dia fantatra fa monina eto Antananarivo ny mpitazona ilay finday nandefasana vola. Natao ny fikarohana ka voasambotra ny lehilahy 01 tetsy Analakely ambadiky ny lapan’ny tànana, ary nentina avy hatrany tany amin’ny birao mba hanaovana ny fanadihadiana. Lehilahy iray 42 taona mpiasa ao amin’ny Minisiteran’ny vola sy tetibola any Ambositra ity lehilahy ity ka niakatra teto an-drenivohitra rehefa nahazo fampiatoana tamin’ny asany. Ilay lehilahy namany kosa mbola tadiavina. Niaiky moa ity farany fa nandray ireo lelavola sy dosie an’ireo olona tany amin’ny faritra ireo ary nanazava ihany koa fa isasahan’izy sy ilay namany ny vola izay alefa ka dimy tapitrisa Ariary avy no anjaran’izy ireo.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68196) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (338) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (194) 18 février 2020